Izinhlobo Ezihlukile Ze-Yoga Asanas Nezinzuzo Zabo - Ukufaneleka
Izinhlobo Ezihlukile Ze-Yoga Asanas Nezinzuzo Zabo
Different Types Yoga Asanas
An asana ukuma komzimba okwenzelwe ukuzuzisa impilo nengqondo. Leli gama lisuselwe egameni lesiSanskrit elisho 'ukuma' noma 'ukuma'. Ngenkathi ijimu ingumqondo omusha kepha yenza izinhlobo ezahlukene ze i-yoga I-asanas ngumqondo weminyaka ubudala. Ngenkathi abantu bezwa njalo asanas ungafaki i-cardio enamandla nezisindo, izifundo zifakazela ukuthi ama-asanas angasiza umuntu ekwehliseni isisindo, azinze amajaqamba enkathi , udubula impilo yenhliziyo nokugaya ukudla . Asanas kungenziwa ngisho nasekhaya ngaphandle kwezinsimbi.
1. Izinzuzo Zama-Asanas
ezimbili. I-Sukhasana Noma i-Easy Pose
3. Naukasana Noma Isikebhe Pose
Isine. Dhanurasana Noma Bow Pose
5. I-Vakrasana Noma Iphutha Elisontekile
6. I-Kakasana Noma i-Crow Pose
7. Bhujangasana Noma Cobra Stretch
8. IHalasana Noma i-Plow Poose
9. ISarvangasana Noma Ukuma Kwamahlombe
10. I-Shirsasana Noma i-Headstand
ishumi nanye. IGomukhasana noma i-Cow Face Pose
12. Izinhlobo Ezihlukile Zama-Asanas FAQ
Asanas sebenzela ukugcoba imisipha, amalunga, imisipha nezinye izitho zomzimba. Lokhu kusiza ukukhulisa ukujikeleza kwegazi nokuguquguquka. Futhi zisiza kangcono impilo yangaphakathi yomzimba njengoba ama-asanas ahlukile esebenza ezingxenyeni ezahlukahlukene zomzimba. Ngakho-ke uma unanoma yisiphi isimo sempilo, ungabheka i-asana efanele ukuzijwayeza ukusiza ukunakekela lesi sifo.
Kwesinye isikhathi, abantu bazizwa belethargic futhi bekhishwe ngaphandle kokuthola isimo esithile sezempilo. Ukuzijayeza nsuku zonke asanas kungakhuphula amandla futhi kuthuthukise nezempilo. Ngenkathi umatasa esimisweni sakho sansuku zonke esimatasa, asanas kungasiza ukugcina ukulingana komzimba nomzimba. Ukwenza imizuzu eyi-10 kuphela asanas kungazuzisa impilo yakho. Sibala ezinye ze- asanas lokho kungaba njalo inenzuzo empilweni yakho .
I-Sukhasana Noma i-Easy Pose
Isithombe: S umaskandi
Lesi yisimanga sabaqalayo njengoba sinikeza umuntu induduzo oyifunayo. I- asana Ngaphesheya kobubanzi besimo somzimba futhi sinikeza injabulo engokomoya. Sukhasana kungcono ukunciphisa ukukhathazeka nokucindezeleka futhi ukukhathala kwengqondo . Ilungisa ukuma komzimba futhi yelule isifuba nomgogodla.
Ithiphu: Hlala nemilenze ifakwe ngaphakathi kwamathanga ahlukile futhi umgogodla kufanele ume mpo. Izandla kufanele zibekwe emadolweni bese ziphefumulela ngaphakathi nangaphandle kahle.
Naukasana Noma Isikebhe Pose
amakhambi asekhaya okunakekelwa kwezinwele
Lokhu kungenye ye- ama-asanas alula . Lokhu asana welula imisipha yesisu futhi ithuthukisa ukugaya futhi kunciphisa amafutha esiswini . Kuhle ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwemisipha yesisu.
Ithiphu: Umuntu udinga ukulala ngomhlane ngemilenze ehlangene nezandla-emathangeni, ngaphandle kokuzithinta. Ngemuva kwalokho umzimba kufanele wenze i-angle engama-30 degree.
Dhanurasana Noma Bow Pose
Inweba umzimba wonke. It isiza ekwehliseni isisindo futhi kukhulisa ukugaya nokujikeleza kwegazi. Kuyasebenza ekwenzeni emuva kuguquguquke.
Ithiphu: Umuntu udinga nje ukulala ngesisu izandla ezinyaweni bese edonsela emuva. Umzimba kufanele wenze ukuma okufana nomnsalo njengoba igama liphakamisa.
I-Vakrasana Noma Iphutha Elisontekile
IVakrasana yenza umzimba uguquke futhi kunciphisa amafutha esiswini futhi kusiza nasekuthuthukiseni ukugaya ngokulawula ujusi wokugaya ukudla.
Ithiphu: Umuntu udinga ukwenza ukuma njengokuma okungaguquki ngokubeka unyawo lwesokudla phezulu phezulu ethangeni langakwesobunxele futhi izandla kufanele zibe ngaphezulu kwekhanda izintende zihlangene. Umgogodla kufanele uqonde futhi ematheni onyawo uyisicaba futhi uqinile. Ngemuva kokukhulula i-pose, umuntu udinga ukushintsha indawo azame omunye umlenze.
I-Kakasana Noma i-Crow Pose
Noma ngubani ofuna ukuthuthukisa amandla abo okuhlushwa, sula ubuvila futhi uthuthukise ingqondo futhi ukulinganisela ngokomzimba , kakasana kuyindlela engcono kakhulu, njengoba yelula imisipha yezingalo, izihlakala, nezingalo zangaphambili. Isimo somzimba senza umzimba nengqondo uzizwe ulula. Ihlanganisa ndawonye ingqondo ehlakazekile. Kunzima ukwenza futhi kuthatha imikhuba eminingi.
Ithiphu: Umuntu udinga ukugoqa nokugcina imilenze ihlukane kancane izandla ziqinile phansi. Ngemuva kwalokho, umzimba kufanele uphakanyiswe nezandla phansi.
Bhujangasana Noma Cobra Stretch
Kuyaziwa njenge-corrector of the curvature futhi kwenza umgogodla uguquke. Isakhiwo sejika le-asana simasajaja imisipha ejulile yangemuva, umgogodla nezinzwa. Kungaba kuhle asana kubantu ababhekene nesifo samathambo sezinhlungu ezisezingeni eliphansi nasemuva. Khulula izinkinga zokuya esikhathini ngokwelula isibeletho namaqanda. It kukhipha ingcindezi ngokusebenzisa izindlala ze-adrenal nezinso ezivuselelayo.
Ithiphu: Ngemuva kokulala phansi esiswini, izandla kufanele zibe phansi ngemuva kokuthi umzimba ongaphezulu kufanele welulwe futhi uphakanyiswe.
IHalasana Noma Igeja Lokulima
I- halasana ivula i-disc yomgogodla futhi ihlose ukugcina uhlelo lomgogodla lusha njengoba lwelula imisipha yomgogodla. Ukwelulwa kudedela ukungezwani emahlombe, izingalo nomgogodla . Ngenye yezinto ezinhle kakhulu asanas ukubhekana nokukhuluphala. Ngokuvuselela izitho zangaphakathi, ingelapha ukuqunjelwa nokuqunjelwa nokuqina kwesifo samathambo entanyeni.
Ithiphu: Qala ngokulala ngomhlane izandla-ohlangothini ngalunye kufanele ziqonde futhi zoluleke. Bese uphakamisa imilenze yomibili bese ubeka izinyawo phezu kwekhanda wenze i-angle engu-180 degree.
uhlu lwama-yoga asanas nezinzuzo zawo
ISarvangasana Noma Ukuma Kwamahlombe
Incazelo ye- USarvangasana ngu 'zonke izingxenye'. I- asana ifaka umzimba wonke futhi uyivuselele. Kubandakanya indlala yegilo futhi kuvuselele imetabolism, ukuhlanganiswa kwamaprotheni nokujikeleza kwegazi. Isimo se- asana uqinisa imisipha futhi kwehlisa amathuba okuba nesifo sezinso namathambo. Ihlose ukunciphisa ukuqwasha, ukudangala nokukhathazeka kwengqondo.
Ithiphu: Njengoba igama liphakamisa, umuntu udinga ukuma ehlombe.
I-Shirsasana Noma i-Headstand
UShirsasana aka 'inkosi yama-asanas' ingenye yezinto ezinzima kakhulu asanas kodwa une izinzuzo eziphawulekayo . It ithuthukisa ukujikeleza kwegazi, inika amandla uhlelo lokuphefumula, ithuthukise ukugxila nokukhumbula. I- asana kuhilela ubuchopho, umgogodla kanye nohlelo lonke lwezinzwa futhi kuvuse izindlala nezindlala zikaphayini. Ukuma okubheke phezulu kusiza ekunciphiseni ukuqunjelwa futhi kuqede ukuphazamiseka kwemizwa nokukhathazeka.
Ithiphu: Thatha ukusekelwa kodonga, ukuqala. Gcina umgogodla uqonde ikhanda lakho libheke phansi nezinyawo zibheke phezulu. Sebenzisa izandla zakho ukuzondla.
IGomukhasana noma i-Cow Face Pose
Ingenye yezinto eziyisisekelo asanas lokho kuvula amahips. Njengoba i- asana welula izinkalo, izingalo, amathanga nomhlane, kuyasiza ekuphumuleni kwemisipha.
Ithiphu: Umuntu udinga ukugoqa amadolo ndawonye bese umlenze wangakwesokudla kufanele ube ngaphezu komlenze wesobunxele unyawo lwesokudla luye ngaphansi kwesinqe sobunxele.
Izinhlobo Ezihlukile Zama-Asanas FAQ
U. Kuyobamba isikhathi esingakanani ukubamba asana ?
TO. Ngenkathi singekho isikhathi esinqunyiwe esabiwe, kuvame ukwenziwa isikhathi esiphakathi kokuphefumula okukodwa kuya kwemibili kuya emizuzwini emihlanu. Kuya ngohlobo lomkhuba we-yoga nokugxila kwayo.
U. Ingabe ikhona imiphumela engemihle yanoma iyiphi i-asana?
TO. Uma kwenziwe kahle, khona-ke ayikho imiphumela emibi. Kungcono ukwenze ngaphansi kweso lochwepheshe uze ubaphelelise.
U. Ingabe ukhona umkhawulo weminyaka yokwenza asanas ?
TO. Akunamkhawulo weminyaka.
U. yisiphi isikhathi esihle sokwenza asanas ?
TO. Okufanelekile, kufanele kwenziwe ekuseni kakhulu esiswini esingenalutho.
U. Ingabe ikhona inqubo ethile yokuphefumula ehlobene nohlobo oluhlukile lwe asanas ?
TO. Njalo asana inezindlela zayo zokuphefumula nezikhathi zokuphefumula nokuphefumula. Qinisekisa ukuthi uphefumula kahle lapho wenza i- asanas uzothola izinzuzo ezifanele zaso. Ukuphefumula kwesisu okujulile, ukuphefumula nge-diaphragmatic kungukhiye. Xhumana nesazi ngezindlela ezinhle kakhulu.
U. Ngabe kukhona oku-pre-or post- asana ukufudumala?
TO. Ngaphambi kokuya kunoma iyiphi i-yoga eyinkimbinkimbi asanas , kungcono ukwelula ukufudumala. Yelula onke amalunga - intamo, ihlombe, indololwane, isihlakala, okhalweni, okhalweni, amadolo , amaqakala, iminwe nezinzwane. Ngemuva kokwenza i-yoga asanas, okusemandleni ukuphinda welule futhi ukuze uphumule. Ungakwenza futhi UShavasana ie ukulala pose ukuthumela i-yoga yakho Workout.
ungayimisa kanjani i-hairfall ne-dandruff
ikhambi elihle kakhulu lasekhaya lokwehla kwenkwethu nokuwa kwezinwele
indlela yokunciphisa inkwethu ezinweleni ngokwemvelo ekhaya
lawula ukuwa kwezinwele nokubuyela emuva
amafutha e-alimondi ezinwele ngaphambi nangemva